MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 947
>Htain Linn - Burmese Politics and Literature (52)
> ပခုက္ကြူမြိႚ သံဃာတော်မဵာူးငိမ်းခဵမ်းစြာ မေတ္ဇာပိုႚ ခဵီတက်ပြဲိံငြ့် ပတ်သက်၍သာသနာ့ ဥသ္တွောင် – အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာူမန်မာရဟန်းတော်မဵား အဖြဲႚခဵပြ် က တသဘောတည်းရြိေုကာင်း ထုတ်ဖော်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂အောက်တိုဘာ ၃၁၊...
>သတင်းကောက်ိုံတ်ခဵက်မဵား – 31st Oct 2007
> သတင်းကောက်ိုံတ်ခဵက်မဵား – 31st Oct 2007 မိုးမခ အထောက်တော် (ဘီအိုင်တီ) ပခုက္ကြ သံဃာတော် တေရြဲႚ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ မေတ္ဇာပိုႚ လမ်းလ္တွောက်ပြဲတြေူပန်လည် စတင်္ဘပီ၊စစ်အာဏာရငြ် ဆန်ႛကဵင်ရေး လပ်ြရြားမြ...
> မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေး နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆရာကြီးဝေဒဂူ ဇောတိသဝေဒမဂ္ဂဇင်းစာတည်းချုပ် ဆရာမြိုင်က ဘယ်သူ့ဆီကရသည်မသိ ညဉ့် ၈နာရီ၄၅မိနစ်ဖွားဟုတွက်ထား ၏်။မမှန်ပါ။ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ဖြစ်သောအခါ ဒေါ်ခင်ကြည်မိသားစုကို ရဲဘော်တွေက မြောင်းမြမြို့သို့ တိတ်တဆိတ်ပို့သည်။ မြောင်းမြရောက်ကာနီး...
>သာသနာ့ဥသ္တွောင် – အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာူမန်မာရဟန်းတော်မဵား အဖြဲႚခဵပြ်ုကီးကို စကဿာပိူိုံင်ငံရောက်ူမန်မာသံဃာတော်မဵာိးံငြ့်ူမန်မာူပည်သူတိုႚက ထောက်ခံ
> စကဿာပိူိုံင်ငံရောက်ူမန်မာသံဃာတော်မဵာိးံငြ့်ူမန်မာူပည်သူတိုႚကသာသနာ့ဥသ္တွောင် – အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာူမန်မာရဟန်းတော်မဵား အဖြဲႚခဵပြ်ုကီးကို ထောက်ခံမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ ပူးတြဲပၝေုကညာခဵက်အတိုင်း ထောက်ခုံကိဆြိုလိုက်ေုကာင်း သိရြိရသည်။ ဒီမြာ...
> ပခုက္ကြူမြိႚတငြ် စစ်အာဏာပိုင်တိုႚ၏ လုပ်ုကံထောက်ခံပြဲကိုသံဃာတော်မဵာိးံငြ့်ူမြိႚခံတိုႚက ဆန်ႚကဵင်ဆိံ္ဋူပမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ ယခု ဒီဗီဘီသတင်ိးံငြ့် ထိုင်ိးိုံင်ငံ အေူခစိုက် သတင်းဌာနမဵား အဆိုအရ ပခုက္ကြူမြိႚနေ သံဃာတော်...
>လ္တွပ်တူပက် ဂဵာနယ် ရောင်းအားကဵ
> လ္တွပ်တူပက် ဂဵာနယ် ရောင်းအားကဵမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ူမတ်ခိုင် ဦးစီးသည့် လ္တွပ်တူပက် ဂဵာနယ်သည် ယခင်သောုကာအပတ်က ရောင်းအား ၅၀ ရာခိုင်ိံနြ်း ကဵခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ စစ်အစိုးရ...
>သတင်းကောက်ိုံတ်ခဵက်မဵား – 30th Oct 2007
> သတင်းကောက်ိုံတ်ခဵက်မဵား – 30th Oct 2007 မိုးမခ အထောက်တော် (ဘီအိုင်တီ) ဖမ်းထားတဲ့ ကေဵာင်းသား တေကြို အူမန်ဆုံး လတ်ြပေးဖိုႚ နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ကေဵာင်းသားတြေ တောင်းဆိုနာရေး ကူညီမြ...
> စက်တင်ဘာတငြ် ကဋ္ဋမ်းလောင်သည်မန်ြဒရာအောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ ဆတ်ြခူးလိုစိတ်နဲႛ မဟုတ်ဘူးနင်းေူခပစ်လိုက်ဖိုႛလည်း မဟုတ်ဘူးကိာံရ ဆူးခက် တလင်းထက်လူသားအားလုံးအတက်ြအရုဏ်ဦး အသစ်စက်စက်တစ်ခုလူသားဆန်ဆန်စိုက်ပဵြိးနေုကူခင်းသာူဖစ်တယ်။ သန်းခေၝင်ထက် နက်တဲ့ ညအရြေႚတောင်အာရစြိုက်ခင်းတနေရာပဵြိးခင်းထဲမြ္ဘာငိမ်းခဵမ်းရေးမဵြိးစေ့ ဋ္ဌကဲပက်လိုႛသူတိုႛတြေ အလင်းပဵြိုးကတယ်သူတိုႛတြေ ရြာသနြ်ုးကတယ်သူတိုႛရဲႚိံလြုံးသားကို...
>မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ အစီအစဉ် 28th Oct 2007
> မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ အစီအစဉ် အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ သတင်းတိုထြာသီခဵင်းပဒေသာသဲကုန်းဆရာတော်ဘုရား – လူမိုက်တရား ၄ ပၝး တရားဆောင်းပၝး၊ ကဗဵာ အထေထြေ စီစဉ်သူ – ဦးပန်တဵာ၊...
>Photos of Burmese Buddhist Monks at the conference to form the Solidarity Front
> သံဃာတော်မဵားအလယ်က မစိုးရိမ်ဆရာတော်ုကီှးိံင့် ပီနန်ဆရာတော်ုကီး တိုႚ တွေႚရစဉ်ိုံင်ငံတကာမှ သာသနာပြ ဆရာတော်များ တစုတစည်းတည်း တွေႚရစဉ် သံဃာအစည်းအဝေုးကီးအပြီး ဆရာတော်များ ပြန်လည်ုကွချီရန် ပြင်ဆင်နေစဉ်(ဓာတ်ပုံ – အယ်လ်အေက...
>ူပည်ပရောက် သာသနာူပြ ဆရာတော်မဵား အားလုံးစုစည်ူးပီူးမန်မာူပည်သာသနာ ဆက်လက်ထနြ်းကားရေး သံဃာ့ဥသ္တွောင်အဖြဲႚုကီး ဖြဲႚစည်းမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၁အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ယခု ရက်သတ္ဇပတ်၊ စနေ၊ တနဂဿေိံနြေႚမဵားတငြ် ကယ်လီဖိုးနီးယာူးပည်နယ်၊ လော့အိန်ဂဵလိစ်ူမြိႚတငြ် အမေရိကန်ူပည်သိုႚရောက်ရြိနေုကသည့်...
>FRANCE24-EN-Exclusive-Reporter in Burma
> FRANCE24-EN-Exclusive-Reporter in Burma No tags for this post. Related posts No related posts.
>Senior Burmese Writers & Artists in exile showed their solidarity with Free Burma activity
> ပြည်ပရောက် သက်ကြီးဝါကြီး စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာ၊ အနုပညာရှင်များ နှင့် သပိတ်မှောက် လူငယ် စာနယ်ဇင်းသမား၊ အနုပညာရှင်များ၏ သဘောထား ကြေညာချက် အပြည့်အစုံ ထွက်ရှိမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇...
>Senior Burmese Writers & Artists in exile will show their solidarity with Free Burma activity
>ူပည်ပရောက် သက်ုကီးဝၝုကီး စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရိာံငြ့် အိုံပညာရင်ြမဵားကူမန်မာူပည်အရေိးံငြ့်ပတ်သက်ူပီး တညီတညတ်ြတည်း သဘောထား ထုတ်ူပန်မည် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ူမန်မာူပည်တငြ်းတငြ် သံဃာတော်မဵာိးံငြ့်...
>ူမန်မိာိုံင်ငံ ကုန်သည်ုကီးမဵာိးံငြ့် စက်မလြက်မြ လုပ်ငန်းရင်ြမဵား အသင်ုးကီးက စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံမမြဵားေူပာင်ေူပာင်တင်းတင်း ကဵြးလန်ြလဵက်ရြိ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ သံဃာ့သပိတ်အရေးတော်ပုံကီးကို သြေးေူမကဵအောင်ူဖိခြဲခဲ့သော စမြ်းအားရင်ြမဵား၊...
>ဗုသ – တြေႛဆုံဆြေးြေိံး ညြိံင်းတာူဖစ်အောင်လုပ်ရမယ်
> တြေႛဆုံဆြေးြေိံး ညြိံင်းတာူဖစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဗုသအောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ နအဖ မီဒီယာတေမြ္ဘာပီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ သံဃာ့အရေးတော်ပုံကို ဋ္ဌကံဖန်လီဆယ် အပုပ်ခဵ တိုက်ခိုက်နေုကတယ်။ ဒၝ မဆန်းဘူးလိုႛေူပိာိုံင်တယ်။ သဲသဲမဲမဲပဲ။ ဒၝပေမယ့်...
>ဇာနည်ဝင်း – အုတ်ခဲတင်တဲ့ကား ဘယ်သူပိုႛလိုက်တာလဲ
> အုတ်ခဲတင်တဲ့ကား ဘယ်သူပိုႛလိုက်တာလဲဇာနည်ဝင်းအောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇္ဘပီးခဲ့တဲ့လ သံဃာ့လပ်ြရြားမတြေကြို ဘယ်သူတြေ ဘယ်လောက်ဖုံးဖုံး တိုိံင်ငံလုံး၊ တကမ္တာလုံး သိသြားပၝ္ဘပီ။ ဓာတ်ပုံ၊ ႟ုပ်ူမင်သုံကားသတင်းတိုႛကိုကည့်ရသူတေကြတောူ့ဖစ်ရပ်တေကြို ကက်ြကက်ြကငြ်းကငြ်း တြေႛခဲု့ကရပၝတယ်။ အထူးသူဖင့်...
> စက်တင်ဘာ သြေးမော်ကနြ်းထိန်လင်းအောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ ရေဝြၝရောင်တော်လန်ြရေး သကဿန်းရောင်တော်လန်ြရေး စက်တင်ဘာတော်လန်ြရေး … ဓမ္ထတေး မေတ္ဇာရနႛံတေကြ ရန်ကုန် အြိံႛ၊ မိံ္ဇလေးအြိံႛူမန်မာေူပအြိံႛ ကမ္တာေူမအြိံႛ လငြ့်ပဵံႛ ပေၞထနြ်း အဲဒၝ...
> သြေးခင်းထဲက လရောင်စိုက်ခင်းဆြေိုံင် (နယ်သာလန်)အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ ယဉ်ကေဵးတဲ့လူတောထဲမြာခေၝင်းမဖော်ရဲအောင်ဒီလောက်တောင့့် လက်ညြိးတရစပ် ပစ်ပေၝက်စကားငေၝက်ငေၝက် ထိုးနေတဲု့ကားဆင်ကန်းဋ္ဌကီးကတော့ေူခသူံပင်ူးပင်းနဲႛ့ တတောဝင် တတောထက်ြနေရဲႛ။ အိပ်ရေးပဵက်ုကယ်ရေကညြတေတြူဖတြ်ူဖတြ်ေုကနေုကတဲ့အရေးအေုကာင်းထဲမြာအခုပဲရဉြ့်လ္တွောက်တော့မလိုလို...
> ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်ိံငြ့် စစ်အာဏာပိုင် ကိုယ်စားလယ်ြတိုႚ တြေႚဆုံ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ ယနေႚနေႚခင်း ၁ နာရီကူမန်မာအတိုက်အခံခေၝင်းဆောင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်ိံငြ့် စစ်အာဏာပိုင်...
>တာရာလင်းယုန် – တစ်ကောင်သော ကေဵးသားကား ဗိုလ်စိုးဝင်ူးဖစ်လာလေသည်
> တစ်ကောင်သော ကေဵးသားကား ဗိုလ်စိုးဝင်ူးဖစ်လာလေသည်တာရာလင်းယုန် အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ ဗိုလ်စိုးဝင်း သ္ဘေပီ။ိုံင်ငံတော်စဵာပန ကဵင်းပသည်။ အလံတ၀က် ၃ ရက် ထူသည်။ိုံင်ငံတော်စဵာပန ဆိုတော့ ဗိုလ်ခဵပ်ြအောင်ဆန်းတိုႛိံငြ့်...
>နန်းညနြ်ႚဆြေ – ဗိုလ်ခဵပ်ြအမြေ ခံယူလေ
> ဗိုလ်ခဵပ်ြအမြေ ခံယူလေနန်းညနြ်ႚဆေအြောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ လေးဆယ့်သုံိးံစြ်၊ ပဵြိရယ်ြမဵစ်ကမိခဵစ်မာတာ၊ မကဵန်းမာ၍ရောက်လာရသူ၊ လပြဵြိူဖြ –ိံစြ်ိံစြ် သမီး၊ ရမြူငီးကဘုန်ုးကီးတေဇော်၊ တပ်မတော်ဧ။်ူမင်ေူမာ် အံ့ခဵီး၊ ဖခင်ုကီးကိုစည်းဝေးနေခိုက်၊ ခြေးထက်မိုက်သည့်လူမိုက်တစု၊ လုံကံမြေုကာင့်ူပည်သူမဵက်ရည်၊...
> ပန်းခဵီထိန်လင်ိးံငြ့် ဂဵပန်ပန်းခဵီဆရာမ ကီကီ တိုႚူမန်မာူပည်အရေး အိုံပညာသရုပ်ဖော်ူပပြဲူပလြုပ်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၄အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇ ယမန်နေႚညနေ ၄ နာရီက၊ူဗိတိန်ိုံင်ငံ၊ လန်ဒန်ူမြိႚ၊ အမဵြိးသားပန်းခဵီခန်းမရြေႚ ထရာဖာဂၝ...
>၂၀၀၇ ခိုံစြ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ်
> ၂၀၀၇ ခိုံစြ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ်မဵက်မြောက်ရေးရာ သတင်းမဵား ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်ရဲႚ မိန်ႛခနြ်းကောက်ိုံတ်ခဵက် မောင်စမြ်းရည်ရႚဲ ကဗဵာ – သံဃာ့သြေးက ကပ်ဆေးလိမ့်မယ် မောင်စမြ်းရည်ရဲႚ ဆောင်းပၝး...
>မောင်ရစ် – အမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အထက်မြာ တပ်မတော် ဆိုတာ မရြိဘူး
> အမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အထက်မြာတပ်မတော် ဆိုတာ မရြိဘူးမောင်ရစ်အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ မိတ်ဆေမြဵား ခင်ဗဵား – ဒီအခဵိန်မြာ လောကုကီးတခုလုံးက ကဵဆုံးသြားတဲ့၊ အကဵဉ်းကဵနေတဲ့၊ ဝေဒနာတြေုကား အံခဲနေတဲ့ သံဃာတော်တြေ၊...
>ဂီတလုလင် မောင်ကိုကို ကယ်ြလနြ်ူခင်း – ဦးပန်တဵိာံငြ့် မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ အမတ်ြတရ အစီအစဉ်
> ဂီတလုလင် မောင်ကိုကို ကယ်ြလနြ်ူခင်းဦးပန်တဵိာံငြ့် မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ အမတ်ြတရ အစီအစဉ်အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇(နားဆင်ရန် ရုပ်ပုံကြိုိံပ်ပၝ) ဓာတ်ပုံအမတ်ြတရ ကောက်ိုံတ်ခဵက်တိုႚကို အူပည့်အစုံတငြ်ုကည့်ပၝ။ (သရုပ်ဖော်...
>ယာတောကသာေူဗာ – ပေၞဆိုပေၞ၊ ပေဵာက်ဆိုပေဵာက် စာရေးဆရာဋ္ဌကီးမဵား
> ပေၞဆိုပေၞ၊ ပေဵာက်ဆိုပေဵာက် စာရေးဆရာဋ္ဌကီးမဵား ယာတောကသာေူဗာအောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ကိုဟိုဒင်းရေ- ဒီကာလမဵားအတငြ်း ဗမိာိုံင်ငံမြာ စာရေးဆရာတြေ အင်မတန်သတိထားနေထိုင် ရေးသားနေရတာခင်ဗဵား သတိထား မိတယ်နော်။ အဲ- ဒၝပေမဲ့ တဘက်မြာတော့လည်း စာရေးသူတခဵြိႛူပန်ပေၞထက်ြလ္ဘာပီး...
Page 947 of 948«1...944945946947948»